Waa maxay EMA iyo sida loogu isticmaalo Xulashada Jeebka? - Pocket Option Review
Isdiiwaangelintu waa bilaash waxayna qaadanaysaa 5 ilbiriqsi oo kaliya…
Maqaalkeygii ugu dambeeyay, waxaan daboolay Sida loo isticmaalo SMA ee Doorashada Jeebka . Maqaalkan, waxaan ku dabooli doonaa walaalka SMA ie EMA ama waxaad wici kartaa celceliska dhaqdhaqaaqa jibbaarada.
1 Waa maxay Celceliska Dhaqdhaqaaqa Sarbeebta (EMA)?
2 Sida loo helo oo loo habeeyo EMA ee Xulashada Jeebka?
3 Sidee looga ganacsan karaa tilmaame EMA?
Waa maxay Celceliska Dhaqdhaqaaqa Sarbeebta (EMA)?
EMA ama celceliska dhaqdhaqaaqa jibbaaran waa mid ka mid ah noocyada celceliska dhaqaaqa (MA) waxaana loo adeegsadaa dhaqamada ganacsi ee muujinaya qiimaha hantida ama qiimaha amniga oo isbeddela muddo wakhti ah. Celceliska dhaqaaqa ayaa aad u xooga saaraya xogtii qiimihii ugu dambeeyay. Si ka duwan, SMA EMA aad ayey uga awood badan tahay waxayna ku siin kartaa natiijooyin sax ah oo badan.
Isagoo ka hadlaya, xisaabinta EMA, Haddii aad akhriday maqaalkeygii hore ee SMA. Waa inaad fahantay sida ay u fududahay in la xisaabiyo celceliska qiimaha amniga adoo isticmaalaya SMA. Waxa aad u baahday in aad ku darto xogta xidhitaanka ee amniga oo loo qaybiyay tirada xilliyada. Si kastaba ha ahaatee, xisaabinta EMA waa xoogaa dhib badan waxayna u baahan tahay xoogaa xisaab ah. Laakiin warka wanaagsan ayaa ah inaad halkan u joogtid ganacsi, sidaas darteed uma baahnid inaad fahamto ama aad xisaabiso xisaabinta maadaama shaqada xisaabinta ay horay u samaysay software Pocket Option .
Sida loo helo oo loo habeeyo EMA ee Xulashada Jeebka?
Dabiici ahaan, waxaad u baahan tahay inaad gasho akoonkaaga marka hore kaliya geli iimaylkaaga, eraygaaga sirta ah, oo guji saxeexa. marka xigta ku dhufo sanduuqa tilmaame oo ka dooro celceliska dhaqdhaqaaqa ee liiska.
Marka labaad, ku dhufo astaanta qalin-qoriga.
Hadda, u beddel saacadda celceliska dhaqaaqa 14 oo hubi inaad dejiso celceliska dhaqaaqa 14.
Mar labaad, guji tusiyaha oo dooro celceliska dhaqaaqa oo saacadda ka dhig 29 oo dooro celceliska dhaqdhaqaaqa sida EMA.
Ugu dambeyntii, beddel midabka adigoo gujinaya calaamadda qalin oo dooro liiska qaababka. Hubi inaad dejiso labada midab ee kala duwan ee labada khad si aad u aragto muuqaal wanaagsan.
Sidee looga ganacsan karaa tilmaame EMA?
Ku-ganacsiga tusaha EMA waa u fududahay sida ka ganacsiga tusaha SMA. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad diirada saarto isgoyska laba sadar.
Marka sadarka 14 uu ka gooyo xariiqda 29 xagga hoose ka dibna xariiqa 14 uu ka sareeyo xariiqda 29 waa calaamad muujinaysa isbeddel xoog leh. oo halkan waxaan ku dhejin karnaa ganacsi iibsi. Waxaan kuu soo jeedin doonaa inaad dhigto ganacsiga iibka kaliya marka xariiqda 14 uu ka sarreeyo khadka 29 muddo dheer.
Sidoo kale, marka xariiqda 14 ay isku xirto xariiqda 29 ee xagga sare oo hadhow ay ka hoos baxdo xariiqda 29 waxay calaamad u tahay isbeddel dhab ah. Waa inaad dhigtaa ganacsiga iibka kaliya marka xariiqda 29 uu ka sarreeyo xariiqda 14 wakhti wakhti fiican ah.
Markaa, ku ganacsiga celceliska dhaqaaqa jibbaarada oo aad u fudud. Haddii aad rabto natiijooyin aad uga wanaagsan waxaad ku dari kartaa Taageerada iyo Iska caabinta . Haddii aad ka hesho calaamadda iibka ee celceliska dhaqaaqa jibbaarada ee u dhow heerka taageerada waxay muujinaysaa isbeddel xoog leh oo la mid ah, haddii aad ka hesho calaamadda iibka celceliska dhaqdhaqaaqa jibbaarada ee u dhow heerka caabbinta waxay muujinaysaa isbeddel xoog leh. Waxaad isku dayi kartaa istaraatiijiyadan bilaashka ah koontada demo ee Option Pocket . Riix halkan si aad u bilowdo oo faallo ka bixi fikirkaaga hoos ama haddii aad rabto in aan wax saxo.
celceliska dhaqdhaqaaqa EMA
Celceliska duubista jibbaarada
Dhaqdhaqaaqa celceliska jibbaarada
Maxay EMA u taagan tahay
Qaabka celceliska dhaqdhaqaaqa jibbaaran
Waa maxay EMA ee kaydka
Previous articleIsticmaalka kanaalka Donchian ee RSI si loo furo ganacsiyo faa’iido leh
Next articleIstaraatiijiyad fudud oo SMA ah oo aad si fudud ugu isticmaali karto Xulashada Jeebka